Akita: Iyo Giant Herding Imbwa yekuJapan - Inobereka
Akita: Iyo Giant Herding Imbwa yekuJapan
Iyo Akita imbwa hombe inobva kuJapan. Idzi imbwa dzine mhasuru uye dzinogona kuronda nhoroondo yavo kudzoka kumashure muJapan yekare. Ivo vakambokudzwa sezviratidzo zvehutano hwakanaka uye mufaro.
Idzi imbwa dzinorinda, kuburikidza-uye-kuburikidza. Ipo ivo vachinyanyo shandiswa seshamwari nhasi, imbwa idzi dzinorinda dzichiri kutakura pamusoro padzo zhinji dzehunhu hwavo munguva dzazvino uno. Izvi zvinogona kuvaita zvisikwa zvakaoma.
Akita akabva kupi?
Akita anotaridzika sei?
Akitas akakura sei?
Ndeapi mavara anogona Akitas kupinda?
Akavimbika uye Anokudzwa Akita
Iko Kuchengetedzwa kweAkitas
Akita Imbwa Hutano Nyaya
Imbwa yakadii Akita?
Ndiani anofanira kuwana Akita imbwa?
Akita imbwa yekare yechiJapan. Iyo inouya kubva kuJapan yekare uye iri Spitz-mhando imbwa. Rudzi urwu runogona kunge rwunodzokera kumashure munhoroondo.
Nekudaro, rudzi urwu sekuziva kwedu nhasi rwakaberekwa kutanga mukutanga kwezana ramakore rechi17 kuchamhembe kweJapan. Kune zvakawanda nhema maererano nezvekuti imbwa iyi yakave sei.
Imwe yengano dzakadai dzinosanganisira murume akadzingwa akadzokawo akada imbwa. Akatumirwa kunogara kunze kwemamwe mazuva ake pachitsuwa.
Akakurudzira vamwe mudunhu reAkita kuti vabereke imbwa yekuvhima yakachinjika yemutambo mukuru. Pakupedzisira, izvi zvakagadzira iyo Akita, inozivikanwa kuvhima mhuka dzesango, mhembwe, uye kunyange kutakura.
Kwenguva yakareba, kuve neAkita kwaingobvumidzwa kumhuri dzeumambo. Nekudaro, munguva pfupi yapfuura, vanhu vezuva nezuva vatanga kuvashandisa sekuvhima uye imbwa dzinofambidzana.
Panguva dzakasiyana munhoroondo, imbwa iyi yakabvaruka pamucheto wekutsakatika. Izvi zvinonyanya nekuti yaive yakatemerwa kune vanokudzwa kune yakawanda nhoroondo yayo. Kudzivirira rudzi urwu kuti rurege kufa, iyo kirabhu yenyika yekuberekesa yeJapan yakavambwa muna 1927.
Helen Keller akazounza Akita wekutanga kuUnited States. Akaendeswa kunoona chifananidzo chaHachiko panguva yekuenda kwake kuJapan.
Uyu Akita ane mukurumbira aizivikanwa nekumirira makore kumuridzi wake pachiteshi chechitima. Mushure mekushanyira chifananidzo, akapihwa maAkita maviri nehurumende yeJapan.
Mushure meHondo Yenyika II, mauto mazhinji akaunza Akitas kudzokera kumatunhu. Nekudaro, iyo Akita haina kupinda muAKC Stud Bhuku kusvika muna1972.
Iye Akita ari rakakura uye imbwa ine simba. Iyo ine yakagwinha, inorema-boned muviri uye yakajairika spitz-mhando imbwa.
Musoro wavo wakakura uye wakakura, uchivaita kuti vakurumidze. Iyi imbwa hombe zvakare ine hombe, yakapetwa-pamusoro muswe.
Idzo dzakamira dzinoita kuti musoro wavo utaridze kutokura kupfuura zvazviri! Maziso avo anopenya ndeimwe yeakakurumbira erudzi. Maziso avo akasvinura uye anoratidza.
Zvinorevei kana muswe waAkita wadzikira?
Muswe waAkita uye unopuruzira pasi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvakasiyana. Kana iyo imbwa yakaodzwa mwoyo, ikarara, kana kurwadziwa, muswe unogona kudonha semhedzisiro.
Izvi zvinowanzoitika kana mbwanana dziri teething sezvo kurwadziwa mumuromo kwavo kunogona kukonzera muswe wavo kudonha sezviri pachena pasina chikonzero.
Muswe wavo unogona zvakare kudonha pavanenge vari kuzorora kana kungoita kwete chaizvo panguva ino. Izvi zvakajairika pakati pembwa dzese dzakasimudza miswe.
Kungofanana nembwa dzine miswe yakatwasuka hazvingagare dzakasimudza muswe dzadzo dzakatwasuka, imbwa dzine miswe yakakombama hadzigare dzakasimudza miswe.
Nekudaro, Akitas anogona zvakare kuwana chimwe chinhu chinonzi a muswe wechando . Izvi zvinoitika kana ivo 'vachimonyoroka' hwaro hwemuswe wavo.
Kazhinji, kana izvi zvikaitika, iyo imbwa haizoimutsa kwevhiki kana maviri nekuti zvinorwadza. Kazhinji yenguva, iyo imbwa inozoita zvirinani pachayo. Dzimwe nguva, zvakadaro, zvingangoda kurapwa nemushonga.
Kune maviri makuru marudzi eAhitas - ChiJapan Akitas uye American Akitas . Musiyano mukuru pakati pemhando mbiri idzi kukura. MaAmerican Akitas akati kurei kupfuura maJapan Akitas.
MaJapan Akitas zvakare ane nzeve diki. MaAmerican Akitas ane nzeve dzakakura kwazvo.
Kazhinji, Akitas anogona kumira chero kubva pamasendimita makumi maviri nemasere kusvika makumi maviri nemasere, anenge masendimita makumi matanhatu nemasere kusvika makumi manomwe nemasendimita. Ivo vanogona zvakare kuyera chero kupi kubva 70 kusvika 130 mapaundi kana ingangoita 31.7 kg kusvika 59 kg.
Vanhurume vanowanzo kuve vakakura kupfuura vakadzi. Iwe zvechokwadi hausi kuzotsvaga mukadzi anopfuura mapaundi zana kana makumi mana nemashanu. Zvisinei, varume vanogona kuwana zvakakura semazana mapaundi zana kana makumi mashanu nemapfumbamwe.
Akitas anogona kuuya mune akati wandei mavara, kusanganisira chena. Tsvuku tsvuku ndeimwe yeanonyanya kufarirwa mavara ejasi.
Nekudaro, sesame, dema, chokoreti, uye brindle zvese zvinogoneka futi. Muchena machena akajairika.
Zvimwe zvekumaka zvakajairika futi. Muchena, pinto, uye matema masiki zvinogoneka.
Iyo Akita ine mbiri-jasi, iyo inoita kuti ive yakanaka mamiriro ekunze-asingagone (uye fluffy).
Akitas akaberekwa kuti ave akasiyana-siyana kuvhima imbwa. Mazhinji ehunhu hwavo hwekare uye hunhu hunhu hunoratidza nanhasi.
Akitas imbwa dzakanaka dzemhuri here?
Kwete kunyanya. Ivo vakavimbika uye vane rudo nhengo dzemhuri zhinji. Vanoda kuva nemhuri dzavo uye vanogona kuva zvishoma kudzivirira.
Nekudaro, ivo havanyanya kufarira vausingazive. Hukuru hwavo hukuru hunogona kuvaita kuti vatadze kudzora futi.
Vachambundirana nenhengo dzemhuri, asi havazi zvakanyanya cuddly. Ivo havasi lapdogs.
Akitas anogona kuve akanaka nevana, asi ivo vakanyanya kunaka nevana vakuru. Ivo havana kunyanya kushivirira nevana vadiki.
Akitas anogona kugara nedzimwe imbwa here?
Kwete. Ivo vanozivikanwa nekuve hasha kune dzimwe imbwa, kunyanya idzo dzevakadzi. Kugara uchishamwaridzana zvinoita kunge kusiri kubatsira izvi. Iyi imbwa ndeyemhuri imwechete-chipfuwo.
Ko Akitas anowana kuparadzana kunetseka here?
Akitas haana kunyanya kukamurana nekuzvidya mwoyo. Nekudaro, chero rudzi rupi zvaro runogona kuwana kupatsanurwa kunetseka, saka zvinogoneka kwazvo.
Kuparadzanisa kushushikana kunogona kukonzera matambudziko akasiyana ehunhu. Nekuti imbwa idzi dzakakura kwazvo, dzinogona kukuvadza zvakanyanya.
Zvisinei, imbwa idzi kazhinji USA kuve nekuzvidya mwoyo kunetseka.
Nei Akitas aine hukasha?
Akitas havana kuberekwa kare kuti vave nedzimwe imbwa dzakawanda. Izvo hazvina kurongedza-zvakatarisana uye zvinogona kuva nzvimbo.
Ichi ndicho chikonzero chikuru ivo vane hukasha. Ivo vanoita zvakanyanya mudzimba-imbwa imwe kana kunyange dzimba dzakasununguka zvachose kubva kune dzimwe zvipfuyo.
Kunyangwe paine runyerekupe, vakadzi veAkita vane hukasha zvakare.
Vese vakomana kana vakadzi vanogona kugadzira vatariri vakanaka nekuda kwehunhu uhu.
Ko Akitas anohukura zvakanyanya here?
Ivo havana kunyanya kuita ruzha, asi vanohukura. Sembwa dzenzvimbo, vanohukura vashanyi, vanhu vachifamba panze, uye imbwa dzinoshamisa. Vanogona kugadzira varindi vakanaka uye imbwa dzinonyevera nekuda kweizvi.
Zvisinei, kana iwe uri kutsvaga imbwa yakanyarara, izvi hazvisi izvo.
Unogona here kudzidzisa Akita?
Kunge imbwa dzese, maAkitas ari inodzidziswa . Ivo vane hungwaru uye vakavimbika, izvo zvinoshanda mukuda kwedu apo isu tiri kuyedza kuvadzidzisa.
Nekudaro, ivo vanogona zvakare kuve vakasindimara uye vanozvimirira. Izvi zvinowanzo kuve zvakajairika mudanho ravo re 'kuyaruka'.
Kutanga uye kazhinji kudzidziswa kwakakosha. Zvikasadaro, imbwa idzi dzinogona kuve dzisingadzoreki. Ivo vanofanirwa kushamwaridzana zvakanyanya sembwa diki.
Makirasi ePuppy anodikanwa kune aya canines. Ivo vanofanirwa kudzidza kugamuchira akasiyana akasiyana vatorwa. Kukanganisa kwavo ndekwekuti vese vausingazive vanotyisidzira; kutanga kushamwaridzana kunoda kugadzirisa iyi fungidziro.
Idzi imbwa chaizvo yakachena. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kune potty chitima. Muchokwadi, dzimwe imbwa dzinowanzo dzika potty dzichizvirovedza ivo zvishoma nesimba kubva kwatiri!
Akitas haina kunyanya kunetsa kutarisira. Muchokwadi, izvo zvavanotarisira zvidiki. Ivo havana hanya zvakanyanya nemamiriro ekunze nemamiriro ekunze, zvichivaita sarudzo dzakanaka kumatunhu mazhinji.
Akita yakawanda sei kurovedza muviri?
Akita anoda zvishoma zvekurovedza muviri nekuda kwesimba ravo rakakwira. Ivo havasi anoshanda zvakanyanya marudzi.
Nekudaro, ivo vanoda mwero wakaringana wekurovedza muviri zuva nezuva. Kufamba nekukasira isarudzo yakanaka, kunyange hazvo rudzi rwechiJapan urwu rungangoda zvakati wandei pane urwu.
Nekurovedza muviri kwemazuva ese, imbwa idzi dzinogona kuita mushe mumusha mudiki. Ivo vakagara mukati uye vanozvibata zvakanaka. Izvo chete pavanowana kurovedza kushoma ndipo pavanogona kuve vanoparadza.
Kunyangwe imwe nguva yekutamba kunze kuseri kwemba inogona kuve yakakodzera sarudzo kune aya canines.
Akita Akachena Chaizvo
Idzi imbwa dzinozivikanwa nekuzvichenesa sekatsi. Ivo vakachena kwazvo uye havatsvake kushambidzika kwakawanda kubva kwauri nekuda kweizvi.
Ivo vane zvidiki zvidiki zvembwa uye havadi kugezeswa kazhinji kazhinji zvachose. Jasi ravo rakadzika rinoda kukwesha zuva nezuva.
Iyo Akita inobereka inokanda mwaka. Munguva idzi nguva, ivo vachazoda kukweshwa zvakanyanya. Kana ivo vasiri kudurura, iwe unogona kukwanisa kuenda nekuvabhenesa kamwe chete pasvondo.
Zvinonyatsoenderana nemunhu uye nenguva yegore. Iwe unofanirwa kugara uchitarisa padanho ravo rekuteura kuti uone kana uchifanira kuvakwesha.
Nguo yavo yepasi ndipo panobva vhudzi ravo rakadururwa, saka iwe unozofanirwa kushandisa rakakodzera brashi kuti usvike pakadzika mujasi ravo. Jasi ravo rekunze rinogona kudurura zvakare, asi kazhinji harina kunyanya kuipa.
Kunge imbwa dzese, iwe uchafanirwa kukwesha mazino avo uye kucheka nzara dzavo nguva dzose. Izvi zvakakosha zvakanyanya kune hutano hwavo. Nzara dzakakura dzinogona kurwadza, uye mazino ane hutachiona anogona kukonzera matambudziko anouraya.
Anodya zvakadii Akita?
Akitas anogona kudya zvizhinji. Vari rakakura imbwa, uye nekudaro dzinoda yakawanda yekuwedzera chikafu kuti ibudirire. Akajairwa munhu mukuru Akita anodya anenge mashanu-6 makapu echikafu pazuva.
Zvisinei, zvakasiyana zvekudya zvine akasiyana macalorie zviyero. Sezvaunogona kufungidzira, izvi zvinogona kukanganisa huwandu hwaunoda kupa yako canine. Tarisa kumashure kweya yako imbwa chikafu bhegi kana can kune yakatarwa mirairo.
Idzi imbwa dzinoda chikafu chepamusoro-protein nekuda kwemuviri wavo une mhasuru. Vanoda mapuroteni mazhinji kuti vachengetedze yavo mitambo.
Zvakawanda zvemhando yepamusoro zvekudya kweimbwa zvine nyama yakawanda, zvinoreva kuti kazhinji zvinowanda mupuroteni. Izvi zvinodhura zvakati wandei, asi zvakakosha kune kwavo kwese kugarika.
Kufanana nezvizhinji zvezvizvarwa, imbwa idzi dzinowanza kune mashoma mashoma matambudziko ehutano. Kutanga, vanogona kuve nematambudziko eziso, senge inofambira mberi retinal atrophy kana PRA.
Ichi chirwere chinonyanya kusanganisira kuparara kwemasero embwa yako, ayo anobatsira iwe canine kuona. Pasina ivo kushanda nemazvo, imbwa inozopedzisira yaita bofu. Ichi chizvarwa mamiriro.
Matambudziko enzeve anogona zvakare kuitika, kunyangwe asiriwo akajairika sevamwe canines. Chero bedzi iwe ukaramba uchitarisa nzeve dzembwa yako nekudzichenesa padzinosviba, mukana wehutachiona hutachiona hunofanira kuderedzwa.
Nekuti imbwa idzi dzakakura, matambudziko ekubatana akajairika. Izvi ichokwadi kune dzese imbwa, asi zvakare ine zvakawanda zvekuita nazvo genetics . Hip dysplasia yakajairika.
Neraki, pane zvinhu zvishoma zvaunogona kuita kuti udzivise izvi matambudziko akabatana . Chekutanga, kurovedza muviri kwakanyanya imbwa painenge ichikura kunogona kukonzera matambudziko akabatana gare gare.
Imbwa dzisina kupedzwa kukura hadzifanirwe kudzidziswa zvakanyanya, uye havafanirwe kudaro kumanikidzwa kurovedza muviri. Kana iyo mbwanana ichida kurara pasi uye kutora zororo panguva yekufamba, iwe unofanirwa kuvarega vazotora zororo.
Iwe unofanirwa zvakare kuona kuti unofudza iyo mbwanana yakakodzera mbwanana chikafu. Hachisi chikafu chembwanana chakakodzera imbwa idzi.
Iwe unoda chikafu chakagadzirirwa vana vakuru vevana. Izvi zvine zvinovaka muviri mbwanana iri kukura inoda kutsigira majoini ayo.
Iyo Akita zvakare iri kuita zvishoma bloat . Hapana anoziva chaizvo chinokonzera chirwere ichi.
Zvisinei, iri kutyisidzira hupenyu uye inoita kunge yakajairika mune dzimwe mhando dzembwa nechikonzero chisingazivikanwe. Izvo zvinonyanya kusanganisira mudumbu kuzadza negasi.
Pakupedzisira, mudumbu unosundira kurwisa tsinga, uchigura kutenderera kune dzimwe nhengo nemhasuru. Izvi zvinogona kukurumidza kukurumidza uye zvinoda kuvhiyiwa nechimbichimbi.
Hypothyroidism zvakajairika futi. Kujairika mune yegland gland inoratidzira kusagadzikana uku. Izvi zvinotungamira pakuderedzwa kweiyo imbwa kugona kwemagetsi, iyo inogona kukanganisa neese marudzi ezvinhu.
Zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kuwedzera huremu, kuneta, kusashivirira kunotonhora, bvudzi rakashama, jasi rakatetepa, uye kuwedzerwa pigmentation yeganda.
Chirwere ichi kwete inorapika, asi inogona kurapwa nemishonga. Imbwa yako inoda kutora remuromo utachiona kutsiva kemikari.
Ndeapi kuongororwa kwehutano kunofanirwa kuve naAkita?
Asati aberekerwa, vangangove vabereki veAkita vanofanirwa kuongororwa zvakasiyana siyana zvehutano. Izvi ndezvekuona kuti havapfuure chero zvingangonetsa kuvana vavo.
Maziso avo anofanirwa kutariswa, uye majoini avo anofanirwa kuvezwa x-ray kuona kuti havagone kutarisira dysplasia.
Iwe unofanirwa kubvunza nezve izvi zviongororwa zvehutano usati watenga chero mbwanana. Zvakare, bvunza nezve hutano hwemubereki.
Kana zvichikwanisika, kumbira kuti uone vabereki nenzvimbo iyo imbwa dziri kuchengetwa mukati kana padiki.
Anogara kwenguva yakareba sei?
Nezve kukura kwavo, Akitas vane hupenyu hwakareba hukuru. Kazhinji, avhareji Akita anorarama pakati pemakore gumi nemashanu. Genetics, nharaunda, uye hutano zvinoita chinzvimbo mune yako Akita ichawira mune iyi nhanho.
Kana imbwa ikabatwa zvakanyanya nezvinetso zvakasiyana zvehutano, hupenyu hwayo hunotarisirwa hunogona kunge hwakadzikira pane imbwa ine hutano, imbwa yemitambo.
Kufutisa kunogona kukonzera matambudziko mazhinji aAkita kuti awedzere. Semuenzaniso, huremu hwekuwedzera hunogona kuisa kushushikana pamajoini, izvo zvinogona kukonzera matambudziko ejoini.
Nekuda kweizvi, iwe unofanirwa kuchengetedza huremu hwembwa yako kana iwe uchivatarisira kuti vave neutano uye vakasimba muhupenyu hwavo hwese.
Sekureva kweThe Drake Center yeVeterinary Care, gomarara iri zvakare chikonzero chinowanzoitika yerufu imbwa idzi.
Akitas kazhinji anodhura akatenderedza $ 800 . Iye chaiye muberekesi iwe unowana iyo imbwa kubva pazvinhu, sezvinoitawo weropa. Imbwa dzinoberekerwa kuratidzwa dzinozove dzinodhura kupfuura idzo dzakaberekwa seshamwari.
Vazhinji vafudzi vane mukurumbira vanobhadharisa kwakawanda imbwa dzinoonekwa se 'dzinoberekana' uye dzinokwana zvakaenzana muyero wekubereka.
Mune mamwe mazwi, kana iyo imbwa ikateedzana nemutoo wekuberekesa uye ikapasa bvunzo dzekuongorora hutano, iyo imbwa inogona kuonekwa seinokosha nekuti inogona kuzoburitsa mbwanana dzemhando yepamusoro.
Kana usiri kuronga pakuberekesa Akita wako, saka unogona kuponesa pane pooch yako nekuita kuti vagadziriswe usati waenda navo kumba.
Mutengo weupenyu hwese waAkita unogona kuve wakakwira kwazvo. Semuenzaniso, iyi imbwa inoshanda yakakura kwazvo, uye saka zvese zvaunotenga zvichafanirwawo kunge zvakakura.
Vachada crate hombe nemubhedha, mapfupa akasimba, uye mihombe mikuru yemishonga pazvinenge zvichidikanwa.
Vanodya zvakare zvakanyanya uye vanoda chikafu chemhando yepamusoro. Nekuda kweizvi, iwe unofanirwa kutarisira kubhadhara zvakati wandei chikafu gore rega.
Sei Akita akarambidzwa mune mamwe maguta?
Mamwe maguta anotora imbwa idzi dzine njodzi uye havatenderi mukati meguta ravo nekuda kweizvi. Zvimwe zvinobvumidza kunze, sekunge kana yako canine ichipasa mimwe bvunzo. Iwe unofanirwa kutarisa neyako yazvino guta nongedzo.
Kune akawanda masangano akasiyana uye vafudzi vanotarisa paAkita. Iyo Akita Kirabhu yeAmerica ndiyo # 1 kirabhu muUnited States. Ivo vanobatana neAmerican Kennel Club uye vane yakawanda ruzivo nezve Akita pane yavo webhusaiti.
Iwe unogona zvakare kuwana rondedzero ye zvikwata zvematunhu uye shandisa yavo Akita kutsvaga kwembwanana kutsvaga vana varipo iye zvino.
Iyo ChiJapan Akita Kirabhu yeAmerica inotarisa kumaJapan Akitas. Ivo zvakare vane runyorwa rwevafudzi kuti iwe uchinje kuburikidza nenhengo dzesangano. Iyi inzira iri nyore yekuona kuti urikutora mhando imbwanana.
United States inogara kune dzakasiyana Akita Kununura. Zvizhinji zveizvi ndezvematunhu, zvakadaro.
Bheji rako rakanakisa nderekutsvaga iyo inovhara dunhu rako, sezvo imbwa dzavanonunura dzichava munzvimbo yako. Izvi zvinoreva kuti unogona kungo famba chinhambwe kuti uvatore.
Kumwe kununura kunogona kubvumira imbwa dzavo kuendeswa kune dzimwe nzvimbo. Nekudaro, izvi zvinowanzoreva kuti iwe uchafanirwa kubhadhara yekufambisa kana kutyaira kunhonga iyo imbwa iwe pachako.
Mamwe emasangano anozivikanwa anosanganisira:
Big East Akita Kununura
Midwest Akita Kununura Sosaiti
Rakki-Inu Akita Kununura .
Japanese Shiba Inu musango
Iyo Akita neShiba Inu imbwa dzakafanana dzakafanana. Ivo vaviri vanobva kuJapan uye imbwa dzerudzi rwechipisi, izvo zvinoita kuti vataridzike zvakafanana. Nekudaro, ivo vanosiyana munzira dzakasiyana siyana.
Musiyano uri pachena ndewekuti Shiba Inu idiki zvakanyanya kupfuura Akita. Shiba Inus anongomira angangoita gumi nematatu kusvika gumi nemaviri papfudzi, nepo Akitas akamira pamusoro pe24 inches. Uyu ndiwo mutsauko mukuru pakati pemarudzi maviri aya.
Shiba Inus zvakare ane hurefu hwekutarisira hupenyu kupfuura iyo Akita. Vanogona kurarama kusvika pamakore gumi nematanhatu muzviitiko zvakawanda.
Kune akatiwandei akasanganiswa eAkita anomhanya achitenderera mazuva ano. Nehunyanzvi, iyo Akita inogona kuberekwa chero imbwa.
Nekudaro, mamwe marudzi akasanganiswa akajairika kupfuura mamwe. Huskita, Akita Shepherd, naAkita Chow ndivo vakajairika kunze uko.
Mimwe yemhando idzi dzakasanganiswa dzave kuita 'dhizaina imbwa' mhando. Mune mamwe mazwi, aya marudzi akasanganiswa ari kuberekwa nechinangwa kuti asangane nezvimwe zvinodiwa.
Izvi hazvireve hazvo chiitiko chitsva sezvo imbwa dzese dzakachena dzaive kamwe marudzi akasanganiswa. Nekudaro, inogona kuve inopokana.
Zvakadaro, zvakaoma kuwana muchengeti uyo anonyanya kugadzirisa imbwa idzi. Nekuda kweizvi, ivo vanowanzo kuve vakaoma kuwana pane yakachena Akita.
Akitas akanakira mhuri imwechete-dzinovaraidza dzine vana vakura. Idzi imbwa zvine simba zvine mutsindo uye dzinoda kumborovedzwa zuva rega rega. Nekuda kweizvi, ivo vanonyanya kukodzera kune avo vangangoita vanoshanda.
Iwe unofanirwa kuronga kutamba nembwa yako kunze kana kuenda navo parwendo zuva rega rega kwemaminitsi makumi matatu. Mbwanana dzinotoda kumwe kurovedza muviri.
Idzi imbwa dzinogona zvakare kuve dzakaoma kudzidzisa. Ivo akanakira varidzi vane imbwa vane ruzivo vanogona kuzvipira kumakirasi ekudzidzisa embwanana uye kugara uchiita zvehukama. Ivo hadzisi imbwa dziri nyore nenzira ipi neipi.
Nekudaro, imbwa idzi dzinogona kuve dzinoyevedza nekutarisirwa chaiko uye imwe yeshamwari dzakavimbika kwazvo dzaunowana. Ivo vane rudo kwazvo nenhengo dzemhuri uye vanogona kutombova imbwa dzinorinda zvakanaka kana zvichidikanwa.
Iyo Akita inogona kuve imbwa yakanaka yemhuri mune mamwe mamiriro. Nekudaro, izvo zvinoda kutarisirwa chaiko uye kubata.
Brindle Imbwa Inobereka: Chinyorwa che9 Akanaka & Tiger-Akamisikidzwa Canines
Golden Retriever vs Labrador: 10 Misiyano Iwe Unofanira Kuziva
kukura kwakaita shih tzu chihuahua mix puppies
maLab esirivha anogadzirwa sei
mazita embwa ane chekuita nekuvhima
mufudzi & labrador retriever musanganiswa
imbwa yakaoma heaving uye kurutsa